"Impilo yosaziwayo kayibona ubukhazikhazi" - Ilanga News
Home Impilo “Impilo yosaziwayo kayibona ubukhazikhazi”
ULerato Mvelase uchaza ngendawo entsha ayilingisayo
UMLINGISI osemnkantshubomvu emidlalweni kamabonakude, wexwayisa abasafisa ukungena kulo mkhakha ngokuthi impilo yosaziwayo kayibona ubukhazikhazi njengoba iningi licabanga kanjalo. ULerato Mvelase (osesithombeni) utshele ILANGA LangeSonto ukuthi uphila impilo eyejwayelekile njengoba engumama wezingane ozimele futhi ofanayo nabanye. Uthi ngaphandle kokunakekela abantwana, wenza imisebenzi yasendlini, ahambise aphinde alande abantwana esikoleni. “Izinkundla zokuxhumana zipenda isithombe okungesona ngosaziwayo. Zenza kubukeke sengathi yonke into ihamba kahle, uphila ntofontofo. “Abaningi bacabanga ukuthi kasenzi lutho emakhaya, kunabantu esibaqashile abenza yonke into. Empeleni nathi siyashukeka, siyabamba siyayeka njengawo wonke umuntu,” echaza. Wenze isibonelo ngokuthi kuyenzeka umdlalo uboniswe kumabonakude ekubeni umlingisi eseyibhubhudle wayiqeda imali yokusebenza kuwona ngoba baholelwa ngesikhathi umdlalo usaqoshwa.
ULINGISA INDAWO YOWESIFAZANE OSEBENZA KANZIMA
ULerato ubekhuluma naleli phephandaba ngomdlalo azobonakala kuwona osihloko sithi, 13 Weeks To Find Mr Right, ozotshengiswa kwiSABC 1 kusuka ngomhla ka-6 kuNhlolanja (February) ngo-19h30. Kulo mdlalo uzokube elingisa indawo yowesifazane ohlonishwayo, osebenza kanzima futhi ofuna imiphumela uma kusetshenzwa. Lona wesifazane ubukeka sengathi yonke into imhambela kahle empilweni yakhe. Uthi impilo yakhe nalo mlingiswa ithi mayicishe ifane. Elandisa ngale ndawo ayidlalayo, uthi imfundise lukhulu ngoba ixoxa ngobudlelwano babesifazane bebodwa ezindaweni zokusebenza, nangobudlelwano bukamama nendodakazi. “Kumnandi njengoba ngilingisa indawo eyehlukile kulo mdlalo. Ngokujwayelekile ngingumuntu onzima (serious), bekumnandi ukuthi ngikhululeke kube mnandi kuhlekwe nje, bengisebenza nethalente elisha kule ndima yezokulingisa,” kusho uLerato. Uthi usanda kubuyela esikoleni ukuqhuba izifundo zeBusiness Management eRegenesys Business School. Uthi wenze lesi sinqumo ngoba engafuni ukuzivalela entweni eyodwa.
USEFUNA UKUSEBENZA NGEMUVA KWAMAKHAMERA “Sengikhulile manje, ngifuna ukuba sendaweni lapho izingane zami zizokwazi ukuthi ziziqhenye ngomama wazo. Ngicabanga ukuthi kungaba wubudedengu ukuthi ngilokhu ngilinde izindawo engizozilingisa, kumele ngikhule manje ngiqale ngizibhalele imidlalo,” kusho yena. Uthi ufisa ukushintsha umkhakha akuwona, kungabi wukuthi izingane zakhe zixoxa ngokuthi wabe engumlingisi kuphela, kepha zixoxe nangoshintho alwenzile. “Uma kwenzeka izingane zami zingena kulo mkhakha, kumele zijabulele izithelo zomsebenzi wami. Ukuba nothando lwento kuhle, kepha kumele kuhambisane nokuzibophezela. Ngifuna ukusebenza ikakhulukazi ngemuva kwamakhamera manje, ngibhale, ngiqondise noma ngibe ngumdidiyeli,” kusho yena. Uthi unethemba lokuthi indawo azobe eyilingisa kulo mdlalo izomvulela eminye iminyango yezindawo ezithi mazicishe zifane nalena yakamuva.
Previous articleUZOVEZA UHLANGOTHI OLWEHLUKILE KWI-DIEPCITY
Next articleOweBucs uhehe izinhloli zase-Europe